Minecraft waa mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan adduunka. Guushii ay ka gaadhay kumbuyuutarrada ayaa sidoo kale loo wareejiyay taleefannada, halkaas oo aad kala soo bixi karto nooca Android ee ciyaartan. Qaybtaan waxaad ka heli doontaa wax kasta oo la xiriira Minecraft oo aadan u baahnayn inaad seegto.
Dhammaan wararka ku saabsan ciyaarta, isbeddelada iyo wararka ku soo kordha, iyo sidoo kale tabaha ugu fiican, waxaad ka heli kartaa qaybtaan. Markaa haddii aad raacdo ka tahay Minecraft, qaybtani sinnaba uma seegi karto.
Sida loo sameeyo miiska falaarta ee Minecraft
Sannado badan oo dhaafa, Minecraft waxa ay ku sii haysaa ciyaar aad u wanaagsan malaayiin isticmaalayaasha ah oo ka kooban bulshada weyn….
Sida loo soo dejiyo oo loo rakibo maqaarka Minecraft oo lacag la'aan ah
Maqaarka Minecraft wuxuu noo oggolaanayaa inaan habeynno muuqaalka dabeecaddeenna. Si ka duwan ciyaaraha kale ee fiidiyaha, gudaha Minecraft waxaan ku ...
10 -ka ugu sarreeya ee loogu talagalay Minecraft Pocket Edition
In kasta oo ay suuqa ku jirtay in ka badan 10 sano, Minecraft waa oo sii ahaan doontaa mid ka mid ah cayaaraha ...
Dhowr maalmood mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan ee sanadkan, oo ay weheliso Wicitaanka Waajibaadka: Mobile, Minecraft ...
Bilooyin badan oo sugitaan ah kadib, Minecraft Earth waxaa hadda laga heli karaa dalal kala duwan, sida Spain iyo Mexico. Si kastaba ha noqotee,…
Beta-ka 'Minecraft Earth', oo ah nooc cusub oo loo yaqaan 'Minecraft' oo diiradda lagu saaray xaqiiqda la kordhiyay, ayaa hadda lagu heli karaa wajiga ...
Bilowgii sanadka, ragga Microsoft waxay si rasmi ah u soo bandhigeen waxa noqon doona nooca cusub ee Minecraft oo ku saleysan ...
Islet Online waa sanduuqa nooca loo yaqaan 'MMORPG sandbox' kaasoo runtii ah waxa ay taageerayaasha Minecraft sugayeen. AMA…
Waqtigan xaadirka ah, ciyaarta kaliya ee noo oggolaaneysa inaan is waafajinno horumarkayaga mar walba waa Fortnite, oo ah ciyaar iskudhaf ah, ...